Fahasaronana hosoka :: Mpamily taksibe nahatrarana karatra polisy sandoka • AoRaha
Fahasaronana hosoka Mpamily taksibe nahatrarana karatra polisy sandoka
Nisy fifamaliana teo amin’ny andiana polisy sy ny mpamily taksibe iray nandalo teny Tsaralalàna, tsy lavitry ny Kaomisaria foibe, omaly antoandro. Nisy karatra maha polisy teny amin’ilay mpamily saingy fantatra fa sandoka izany. Notazonina avy hatrany hanaovana famotorana io mpamily io.
Niafara tamin’ny fanaovana teny mahery ny fifamaliana tamin’ireo mpitandro filaminana sy ilay mpamily nitondra taksibe. Nitangorona ny olona, rehefa gaga tamin’ny fahenoana ny tabataba teo afovoan’arabe.
“Voatery nosakanan’ny polisy, teny Tsaralalàna, noho ny fandikana lalàn’ny fifamoivoizana ilay mpamily. Notevatevainy anefa ireo polisy nanao ny asany. Nampiseho karatra milaza fa “Inspecteur de police” ihany koa izy. Teo no nahatonga ny fifamaliana teo amin’ny roa tonta. Tsy nisy ny fikasihan-tanana. Nentina tany amin’ny birao ilay mpamily ka teo no nahitana fa karatra sandoka no teny aminy”, hoy ny fanazavan’ny polisy.Voalaza fa fampiasana karatra sandoka no iampangana an’ ity mpamily ity.
Fikambanana miaramila :: Rava ny vondron’ireo manamboninahitra lefitra
Voina tamin’ny fanafihana